खानाका परिकार, गीत सँगित, लाईभ कन्सर्ट, खेलकूद र मनोरञ्जन, जिरी स्ट्रिट फेस्टिभलको आकर्षण हुनेछः अध्यक्ष खड्का - Edolakha
खानाका परिकार, गीत सँगित, लाईभ कन्सर्ट, खेलकूद र मनोरञ्जन, जिरी स्ट्रिट फेस्टिभलको आकर्षण हुनेछः अध्यक्ष खड्का
9 months ago/Thursday, October 17th, 2019
दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा शुक्रवारदेखि तिन दिने ‘जिरी स्ट्रिट फेस्टिभल’ सुरु हुँदैछ । युवा सञ्जाल जिरीको आयोजनामा हुने फेस्टिभलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडकमै खाने र सडकमै रमाउने उद्धेस्यका साथ आयोजना गरिएको महोसत्वले सगरमाथाको प्रवेश द्धार जिरी अहिले बेहुली झैं सिँगारिएको छ । प्रस्तुत छ, महोत्सवका सन्दर्भमा सहकर्मी दुर्गा बस्नेतले आयोजक युवा सञ्जाल जिरीका अध्यक्ष केन्द्रज्योति खड्कासँग गरेको कुराकानी ।
युवा सञ्जाल जिरीले जिरी स्ट्रिट फुड फेस्टिवलको आयोजना गर्न लागेछ । यो फेस्टिवल आयोजना गर्नुको मुख्य उद्धेस्य के हो ?
जिरी भनेको पहिलेदेखि नै पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिएको ठाउँ हो । जिरीको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि र जिरीलाई यो पर्यटकीय गन्तव्य हो भनेर चिनाउनका लागि विशेषगरी यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । चाडपर्वका साथै भिजिट नेपाल २०२० लाई लक्षित गरेर हामीले जिरी स्ट्रिट फुड फेस्टिवल आयोजना गरेको हो । यसको मुख्य उदेश्य भनेको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ भन्ने हो ।
अनि, यो फेस्टिभलको तयारी कहाँ पुग्यो ? फेस्टिभलका मुख्य आकर्षणहरु के–के हुन् ?
फेस्टिभलको तयारी पुरा भएको छ । हामीले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसारका काम गरेका छौँ । त्यस्तै फलेक्स, व्यानरहरु पनि हामीले सम्बन्धीत स्थानहरुमा राखिसकेका छौँ । यसमा मुख्य गरेर तीनवटा पक्षहरु छन् । यसमा पहिलो पक्ष भनेको जिरीको स्थानीय खाद्य परिकार अर्थात् फुड स्टलहरु राखिन्छ । दोस्रो भनेको सांगितिक कार्यक्रमहरु हुन्छ । सांगितिक कार्यक्रम चाँही ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरुको साथमा हुनेछ भने लाइभ कन्र्सटहरु हुन्छ, नृत्य प्रतियोगीता हुन्छ । यस्तै यहाँ अन्य रमाईलो मेलाहरुमा हुने कोलम्वस, रेल, ट्रेनहरु लगायत अन्य मनोरञ्जनात्मक खेलहरु पनि हुन्छ । यी सवै कार्यक्रम एकैपटक आयोजना गर्न लागिएको जिरीमा पहिलो पटक हो । यस्तै भलिबल खेल, हाइकिङ, जिप सफारी र जिरीका विभिन्न स्थानमा लगेर साइक्लिनिङ गराउने कामहरु पनि हुन्छ । साथसाथै स्थानीय जिरेल, शेर्पा, तमाङ लगायतका झाँकि प्रदर्शन पनि हुन्छ ।
पहिलो पक्ष भनेको जिरीको स्थानीय खाद्य परिकार अर्थात् फुड स्टलहरु राखिन्छ । दोस्रो भनेको सांगितिक कार्यक्रमहरु हुन्छ । सांगितिक कार्यक्रम चाँही ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरुको साथमा हुनेछ भने लाइभ कन्र्सटहरु हुन्छ, नृत्य प्रतियोगीता हुन्छ । यस्तै यहाँ अन्य रमाईलो मेलाहरुमा हुने कोलम्वस, रेल, ट्रेनहरु लगायत अन्य मनोरञ्जनात्मक खेलहरु पनि हुन्छ ।
फुड फेस्टिवल भनेपछि सडकमै खाने सडकमै रमाउने भन्ने बुझिन्छ । जिरी आउने पर्यटकले कुन–कुन परिकारका स्वाद लिन पाउँछन् ? र अन्य मनोरञ्जनका बिषयहरु के–के हुन्छन् ?
हजुर, खाद्य परिकारका कुरा गर्दा जिरीको मुख्य उत्पादन आलुको परिकारहरु हुन्छन् । जस्तै आलुको ढिँडो हुन्छ, कोदोको परिकारहरु हुन्छन्, जिरीमा मात्रै पाइने पेय पदार्थ सिर्मा, चिज, छुर्पी, किवि, ट्राउट माछा, नेवारी आइटमहरु लगायतका परिकार राखिन्छन् । यस्तै हामीले अन्य स्थानहरुबाट आएका विभिन्न खाद्य पदार्थलाई पनि प्राथमिकता दिने तयारी गरेका छौँ ।
यस्ता मेला, महोत्सवको आयोजनामा लगानीको कुरा पनि आउँछ । यो फेस्टिभलमा कति खर्च हुँदैछ र त्यो खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
हामीले सुरुमा यो फेस्टिभल सानो तरिकाले गर्ने भनेर सुरुवात गरेको, तर सवैले यो बृहत बनाऔँ भनेर हौसला प्रदान गरेपछि यो निकै बृहत नै भइसकेको छ । हामीले सुरुमा गरेको योजना भन्दा बढी १५ देखि २० लाखसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौँ । त्यसको व्यवस्थापनमा हामीलाई नगरपालिका, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना, पर्यटन बोर्ड र अन्य विभिन्न संघ/संस्थाहरुले पनि सहयोग गर्ने छन् । यसका साथसाथै देश विदेशमा बस्ने हाम्रा जिरीवासी, दोलखा जिल्लावासी लगायत अन्य सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुका लागि इन्टरनेट मार्फत क्याम्पियनिङ गरीरहेका छौँ । त्यहाबाट पनि रकम उठ्नेक्रम जारी छ । तर यति नै उठ्छ भने हामी भन्न सक्ने स्थितिमा चाँही अहिले नै छैनौ ।
पहिले हामिले सानो स्केलमा गर्ने भनेको अहिले वृहत स्केलमा गइसकेपछि त्यसको प्रचारप्रसार पनि त्यही अनुसार नै भइरहेको छ । हामिले आम नागरिकलाई जिरी आउनुस् भनिरहेका छौं । अनि विभिन्न ट्राभल्स एण्ड टुर्सले पनि लगभग जिरीमा धेरै पर्यटकहरु ल्याउने भन्ने कुरा छ । डेढ दुई सय पर्यटकहरु प्याकेजमार्फत पनि आउँदैछन् ।
युवा सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सहयोग जुटाईरहेको छ । दुई, पाँच हजार सहयोग जुटाएर महोत्सवको आयोजना गर्नु ठिक हो र ?
सहयोग जुटाएर गर्नु भन्दा पनि यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ । कार्यक्रम गर्दाखेरी सबै जिरीवासीको अपनत्व होस् भनेर सहयोग लिने गरेका छौं । सम्पूर्ण दोलखाबासिले यो कार्यक्रममा सहयोग गर्नु सुभेक्षा राख्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । हामीले त्यस्तो जवरजस्ति गरेका छैनौं चिनजानका साथिहरुलाई सकिन्छ भने सहयोग गरौं भनेका हौं । त्यसमा कोही खुसी भएर हुन्छ गर्नुस् भनेर आँट, भरोसा दिएर जिरीको प्रवद्र्धन हुन्छ भने हामी किन सहयोग नगर्ने भनेर दिनुहुन्छ भने त्यसलाई हामिले सजिलै स्विकार गर्नुपर्छ । त्यो धेरथोरको कुरा भन्दापनि सहभागीताको कुरा हो । थोपाबाट घैला भरिन्छ भन्छ नी त्यस्तै गरेर सहयोग गर्दै जाँदा ठुला–ठुला कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न सकिन्छ । पहिले पनि हामिले त्यसरी नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना ग¥यौं । जस्तै खेलकुदमा दोलखा जिल्लाकै सर्वाधिक राशिको फुटबल प्रतियोगिता पनि हामिले यहि प्रक्रिया मार्फत ग¥यौं । त्यहि भएर हाम्रो प्रयास पनि छ, हामिलाई दिने हातहरु धेरै छन् ।
त्यसो भए, यो फेस्टिभलमा कति पर्यटक जिरी आउलान् ? तँपाईहरुको अपेक्षा र तयारी कस्तो छ ?
हजुर, मैंले अघि नै पनि भने पहिले हामिले सानो स्केलमा गर्ने भनेको अहिले वृहत स्केलमा गइसकेपछि त्यसको प्रचारप्रसार पनि त्यही अनुसार नै भइरहेको छ । हामिले आम नागरिकलाई जिरी आउनुस् भनिरहेका छौं । अनि विभिन्न ट्राभल्स एण्ड टुर्सले पनि लगभग जिरीमा धेरै पर्यटकहरु ल्याउने भन्ने कुरा छ । डेढ दुई सय पर्यटकहरु प्याकेजमार्फत पनि आउँदैछन् । काठमाडौंतिर बुझ्दा पर्यटकहरु आउने भन्ने कुरा भइरहेको छ । बाहिरवाट आउने पाहनुहरुको लगभग चार पाँच हजारको सहभागिता होला । सगँसगैँ छिमेकि जिल्लाहरुबाट पनि आउने हुँदा १५ देखि २० हजार पर्यटकहरु हुन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।
अन्त्यमा, जिरी फुड फेस्टिभलले दोलखाको पर्यटन विकास र भिजिट नेपाल २०२० लाई कस्तो सहयोग पु¥याउला ?
एकदमै सहयोग पुग्छ किनभने हामिले यो कार्यक्रम भिजिट नेपाल २०२० को पूर्वसन्ध्यामा गरिरहेका छौं । जिरी आफैंमा पर्यटकीय गन्तव्य हो र यो कार्यक्रम मार्फत् फेरी पनि जो–जो पर्यटकहरु आउनुहुन्छ उहाँहरुले गएर जिरी यस्तो रहेछ, नेपालको सुजरल्याण्ड भनेर भन्छन् , सगरमाथाको प्रवेशद्धार हो, प्राकृतिक, सांस्कृतिक हिसावले उपयुक्त छ भिजिट गर्नको लागि भनेर यहाँबाट गएपछि अरुले म्यासेज थ्रो गर्छन् । त्यो भइसकेपछि भिजिट नेपाल २०२० मा पर्यटकहरुको संख्या एकदम बढ्छ । यसले जिरी मात्रै नभइ सिंगो दोलखाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने छ ।
३० असोज २०७६ । ११ः३० बजे प्रकाशित
VIEWS: 5320 पटक हेरीएको